Artist News | Artist Khabar
Artist News	गोविन्द र गोपालकाजीको हातपातको विवाद मिल्यो	फागुन, काठमाडौं । चलचित्र वितरक गोविन्द शाही र गोपालकाजी कायस्थबीचको विवाद मिलेको छ । गोविन्दले आफूमाथि हातपात गरेको भन्दै कायस्थले प्रहरी र चलचित्र संघमा निवेदन दिएपछि सुरु भएको विवाद अन्ततः माफिमा गएर मिलेको हो ।
बिहीबार चलचित्र वितरकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघमा बसेको बैठकले पछिल्लो रिलिज चलचित्र ‘किङ’ को काठमाडौं उपत्यकाको..	मुना थापाको एकाबिहानै यस्तो म्यासेज- कता हुनुहुन्छ ? भृकुटीमण्डपमा भेटौ है आज	फागुन, काठमाडौं । गायिका मुना थापाले कता हुनुहुन्छ ? भृकुटीमण्डपमा भेटौ है आज भनिरहँदा लाग्न सक्छ, आखिर किन बोलाइन् त मुनाले ? गायिका मुनाले कुनै अन्यकामका लागी नभएर राष्ट्रिय लोकतथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो अन्तर दोहोरी साँझ स्तरीय रनिङ्ग शिल्ड राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा सबैलाई भेट्नका लागी आग्रह..	रेखा र कोमल राप्रपा केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित, रेखालाई १६ सय र कोमललाई १८ सय मत	फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकिकृत महाधिवेशनबाट अभिनेत्री रेखा थापा र गायिका कोमल ओली केन्द्रिय सदस्यमा निर्वा्चित भएका छन् । मंगलबार राजधानीमा भएको महाधिवेशनमा दुबैले उम्मेदवारको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । रेखाले १६ सय र कोमलले १८ सय मत प्राप्त गरिन् । चलचित्र संचारकर्मी प्रकाश सुवेदी भने पराजित भएका..	‘लुट २’ को ‘ठमेल बजार’ गीतलाई युट्युवमा १ करोड दर्शक	फागुन, काठमाडौं । चलचित्र 'लुट २' को ठमेल बजार गीतलाई युट्युवमा १ करोड पटक हेरीएको छ । गत अक्टुबर २१ तारिखमा युट्युवमा अपलोड भएको यस गीत चार महिनामै किर्तिमान कायम राखेको हो ।
यसअघि 'वडा नम्बर ६' फिल्मको सुर्के थैली र 'छक्का पञ्जा'को पुर्व पश्चिम रेल गीतले पनि १ करोड युट्युव दर्शक कमाईसकेका छन् ।
निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरेको यस चलचित्रलाई..	निर्माता तथा बितरक मानन्धरलाई पितृ शोक	फागुन, काठमाडौं । चलचित्र निर्माता तथा वितरक सुनिल मानन्धर पितृ शोकमा परेका छन् । आईतबार मानन्धरका पीता श्याम बहादुर मानन्धरको आफ्नै निजी निवास वालुवाटारमा ८५ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट ग्रसित मानन्धर पीता औषधीको सहारामा जीवन कटाउँदै थिए । मानन्धर परिवारमा परेको शोकमा सहानुभुती व्यक्त गर्न..	अनमोलको ‘कृ’ लुक्स सार्वजनिक गरीदिए महादेव त्रिपाठीले	फागुन, काठमाडौं । अनमोल केसीले अभिनय गर्ने चलचित्र 'कृ' को लागी यतिखेर अनमोलले आफ्नो लुक्सको लागी बाहिर निस्किन मिलेको छैन । चलचित्र ‘कृ’को छायांकन सुरु नभएकाले पनि अनमोललाई आफ्नो गेटअप लुकाउन गाह्रो परेको छ । धेरैजसो घरमै बस्ने अनमोल कहिले काँही बाहिर निस्कनुपर्दा कपाल लुकाएर निस्कने गर्दछन् ।
यसरी आफ्नो लुक्सलाई बाहिर ल्याउन नखोजेका..	रेखा थापा राप्रपामा केन्द्रिय सदस्यको दावेदार	फागुन, काठमाडौं । नायिका रेखा थापा यतिखेर राप्रपा पार्टिमा तल्लीन भएर लागीरहेकी छिन् । केहिसमय अघिमात्र पार्टि अध्यक्ष कमल थापाबाट टिकालगाएर पार्टि प्रवेश गरेकी रेखा पार्टिमा गए लगतै कतिले प्रशंमा पनि दिएका छन् त कहिले आलोचना पनि गरेका छन् ।
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा फागुन ६ गतेदेखी हुने पार्टी एकता महाधिवेशनको तयारी तिब्र भइरहेको छ ।..	कोमल वलीले दिइन् रेडियो नेपालबाट राजिनामा	फागुन, काठमाडौं । सञ्चारकर्मी तथा चर्चित लोकगायीका कोमल वलीको अब देखी रेडियो नेपालमा समाचार सुन्न नपाइने भएको छ । वलीले रेडियो नेपालबाट राजिनामा दिएकी हुन् ।
रेडियो नेपालबाट केहि समय अघि कोमलले राप्रपा नेपाल पार्टिमा लागेर राजनिति गर्ने बताएकी थिइन् ।उनी राजनीतिमा लागेसँगै रेडियो नेपालले वलीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण..	यसपालीको रेखाको भ्यालेन्टाइन राप्रपासँग	फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेलिब्रेटीहरुले पनि प्रत्येक बर्ष ‘भ्यालेन्टाइन’ वीस गर्दै आएका छन् । यसैबिच यसबर्षको भ्यालेन्टाइनमा अभिनेत्री रेखा थापाले पनि वीस गरेकी छिन् । रेखाले यसबर्ष भने चलचित्रकर्मिहरुसँग नभएर राप्रपा नेताहरुसँग मनाएकी छिन् । केहि समय अघिमात्र राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेकी रेखाले राप्रपाको पहिलो एकताको महाधिवेशन..	धुर्मुस सुन्तलीले मुसहर बस्तीमा यसरी मनाए ‘भ्यालेन्टाइन’	फागुन, बर्दिबास । तेस्रो एकिकृत बस्ती निर्माणमा जुटेका कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले मुसहर बस्तीमै प्रेम दिवस मनाएका छन् । प्रेम सम्बन्धबाट वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेका उनीहरुले एकिकृत नमूना मुसहर बस्तीमा श्रमदान गरेर दिवस मनाएका हुन् ।
मुसहरहरुसँग पनि प्रेम साटासाट गर्न भ्यालेन्टाइनमा श्रीमान श्रीमति..	Pages:1234567...46»